Filtrer les éléments par date : mercredi, 12 août 2020
mercredi, 12 août 2020 16:17
Famarotana entana azo hanina: Mila fahazoan-dalana avokoa
Namoaka naoty fampatsiahivana ireo lalàna misy ny ministeran'ny indostria, ny varotra ary ny asa tanana, tamin'ny 10 aogositra 2020, fa ireo mpanafatra entana azo hanina, na ireo mpamokatra eto an-toerana dia tsy mahazo mivarotra ireo entana azo hanina raha tsy nahazo fahazoan-dalana avy amin'ny sampan-draharahan'ny ministeran'ny varotra eny anivon'ny Faritra isan-tokony.
Voakasik'izany ihany koa ireo mpampongady sy mpanelanelana izay raisina ho tompon'antoka ihany koa raha mivarotra entana azo hanina tsy nahazoana fahazoan-dalana mialoha.
Ireo entana rehetra azo hanina tsy manana izay fahazoan-dalana hamidy izay dia giazina avy hatrany, ary esorina eny amin'ny tsena.
mercredi, 12 août 2020 16:13
Faritra ATSINANANA: Hifantoka tanteraka amin’ny asa fampandrosoana
Tapitra ny fihibohana vokatry ny valanaretina Covid-19 raha ny eto amin'ny Faritra Atsinanana, hifantoka tanteraka amin’ny asa fampandrosoana ny Ekipan’ny Governora RAFIDISON Richard Théodore.
Fanambin’ny Governora Faritra Atsinanana hatramin’ny nandraisany ny andraikiny ny 19 martsa, ny hametraka ny faritra Atsinanana ho anisan’ireo Faritra mpitarika na « région pilote », manoloana ireo vina sy fandaharan’asa sy tetik’asa kasain’ny fitondram-panjakana apetraka.
Mila Faritra matanjaka, miasa ary mazoto anefa izany fanamby goavam-be izany. Ary tsy ho tratra velively ny tanjona, raha tsy ireo hery velona rehetra anatin’ny Faritra Atsinanana no mifandrimbona amin’izany.
Fepetra iray ihany izany, fa ny tena takian’ny Fampandrosoana dia ny fananana Drafitrasam-pampandrosoana maty paika, marina ary eken’ny rehetra.
Ady amin’ny Covid-19: Tonga ireo « concentrateurs d'oxygène » andiany faharoa miisa 1095
Nigadona teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato omaly ny fiaramanidina nitondrana ny andiany faharoa amin'ireo « concentrateurs d'oxygène » miisa 1095. Tohin'ireo efa tonga tamin'ny 09 Aogositra 2020 lasa teo ireto.
Misitraka izao fampitaovana izao avokoa ireo hopitaly lehibe rehetra manerana ny Nosy, izay mandray ireo mararin'ny Covid-19. Nanamafy ny Minisitry ny fahasalamam-bahoaka, Pr Ahmad Ahmad fa ny tanjona voalohany ampiasaina ireo fitaovana ireo dia ny hanafoanana tanteraka ny isan'ireo aina hafoy amin'ny valanaretina "Coronavirus", noho ny tsy fahampian'ny fitaovam-pitsaboana, araky ny efa nambaran'ny Filoham-pirenena.
mercredi, 12 août 2020 12:23
12 août: Journée Internationale de la jeunesse.
mercredi, 12 août 2020 12:19
Fitaterana hazo sarobidy: Manome alalana hitaona izany ny minisitry ny serasera
Aleo dia ampiasaiko ilay tenin'ny namana iray iny hoe: "Za zany dé tsy nahateny tsony fa nalahelo be fotsiny".
Ny minisitry ny serasera dia nanome alalana orinasa hitatitra hazo anamboarana ny Rova Manjakamiadana.
Raha tsiahivina moa dia Tropical Woods no nahazo ny tsena nanamboatra ny resaka hazo tao amin'ny Lapan'ny Tanàna Antananarivo Renivohitra, nanamboatra ny tranon'ny Filoha Andry Rajoelina, ary namana akaiky an'ingahy Mamy Ravatomanga.
Ny minisitra Lalatiana Rakotondrazafy moa dia akaiky an'i Mamy Ravatomanga, izay izy no mampiantrano sy miantoka amin'ny ampahany ny fampandehanan-draharahan'ny Free Fm sy Gazety Free ao amin'ny Villa La Pradon Antanimena.
Antenaina fa nisy fifaninana tolo-bidy izy ity.
mercredi, 12 août 2020 11:47